ခြင်ကိုက်ခံလို့ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ရောဂါတွေကို သိပြီးပြီလား? - For her Myanmar
ခြင်ကိုက်ခံလို့ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ရောဂါတွေကို သိပြီးပြီလား?
ဖတ်ကြည့်ရင်းနဲ့တောင် ဟိုနားက ခြင်ကိုက်သလို ဒီနားက ခြင်ကိုက်သလို.. :'(
ခြင်ဆိုတာ သေးသေးလေးနဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အင်မတန် အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့အကောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ စင်တီမီတာ အနည်းငယ်လောက်ပဲ ရှိတဲ့ အကောင်လေးတွေ ကိုက်တာခံရရင် ရရှိနိုင်တဲ့ရောဂါတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အခု ဒီဆောင်းပါးမှာ ခြင်ကိုက်ခြင်းကြောင့် အဖြစ်များတဲ့ရောဂါတွေထဲက တချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ ဦးနှောက်အမြှေးပါး ရောင်ရမ်းခြင်း
ခြင်ကိုက်ရာက တစ်ဆင့် ပျံ့နှံ့နိုင်တဲ့ ရောဂါအုပ်စုထဲမှာ ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါတွေက အတော်လေး အဖြစ်များပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်က ငှက်တွေရဲ့ သွေးထဲမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒီငှက်တွေကို ကျူးလပ်စ်ခြင် (Culex Mosquitoes) အမျိုးအစားက ကိုက်လိုက်ရာက တစ်ဆင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးက ခြင်တွေဆီ ရောက်ရှိသွားပါတယ်။ ဒီကျူးလပ်စ်ခြင်တွေက လူတွေကို သွေးပြန်စုပ်ရာကနေ ရောဂါပျံ့နှံ့ ဖြစ်ပွားစေပါတယ်။
ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်နာမည်ကိုတော့ West Nile ဗိုင်းရပ်စ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ခြင်တွေ သယ်ဆောင်လာတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်က လူကိုကိုက်လိုက်တာက တစ်ဆင့် သွေးထဲ ဝင်ရောက်သွားပါတယ်။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်က ဦးနှောက်နဲ့ ကျောရိုးမကြီး တစ်ဝိုက်ကို ရောင်ရမ်းလာစေပါတယ်။
လူနာက ဒီအချိန်မှာ ဖျားမယ်၊ ခေါင်းကိုက်မယ်၊ ပြန်ရည်ကြောအကြိတ်တွေ ကြီးလာမယ်၊ ဇက်တောင့်လာမယ်။ အခြေအနေအတော်ဆိုးတဲ့သူတွေမှာဆို တက်မယ်၊ ကိုမာခေါ်တဲ့ သတိမေ့မြောတဲ့အဆင့်ထိ ရောက်မယ်။ အဲဒီကနေ အသက်သေဆုံးတဲ့ အဆင့်ထိ ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ အချိန်မီ ကုသနိုင်ရင် အသက်ရှင်နိုင်ပေမဲ့ တစ်သက်လုံး အာရုံကြောအဖွဲ့အစည်း ထိခိုက်မိသွားဖို့ ပိုများပါတယ်။
ကမ္ဘာ့နေရာအသီးသီးက နေရာပေါ်မူတည်ပြီး ဒီဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါကိုလည်း အမျိုးမျိုး ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ ဥပမာ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်နဲ့ မက္ကဆီကို ပင်လယ်ကွေ့မှာဖြစ်ရင် St. Louis ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ၊ အက်တလန်တာလို့ခေါ်ပြီး ကာရီဘီယံပင်လယ်တစ်ဝိုက်နဲ့ တောင်အမေရိက တစ်ဝိုက်မှာဖြစ်ရင် Eastern Equine ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါလို့ ခေါ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အာရှတစ်ဝိုက်နဲ့ ပစိဖိတ်အနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ရင် ဂျပန်ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါ စသည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။
လေ့လာမှုတွေအရတော့ ကူးစက်ခံရတဲ့သူ ၁၅၀ မှာ တစ်ယောက်လောက်ပဲ ရောဂါလက္ခဏာတွေ ဆိုးဆိုးရွားရွား ခံစားရစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူ အထူးသဖြင့် အသက်၅၀ ကျော် လူကြီးတွေဆို ပိုပြီးခံစားရပါမယ်။ ရောဂါတစ်ခါ ကူးစက်ခံရပြီးပြီဆိုရင် သဘာဝအရကို ဒီရောဂါကို ကာကွယ်မှု ပေးလိုက်သလိုဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခါ ထပ်မကူးစက်ခံရတော့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
အပူပိုင်းနဲ့ သမပိုင်းဇုန်ဒေသတွေမှာ ပိုအတွေ့ရများတဲ့ ရောဂါတစ်ခု (မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း အတော်လေးအဖြစ်များပါတယ်) ကတော့ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါကို သယ်ဆောင်တာက အေးဒီစ် (Aedes Mosquitoes) ခြင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ကူးစက်ပုံကလည်း အပေါ်က West Nile ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပုံနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။
သွေးလွန်တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်က လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်ရောက်ပြီးရင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဆဲလ်တွေကို ဖျက်စီးပစ်နိုင်ပါတယ်။ ပြနိုင်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက ပုံမှန်ဖျားနာတာနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။
ဖျားတာ တစ်ပတ်ကျော်ပြီး ကိုယ်တွင်းသွေးယိုတာတွေ၊ အညိုအမည်း စွဲတာတွေပါ တွဲဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ သွေးလွန်တုပ်ကွေး သွေးယိုအဆင့်ထိ ရောက်သွားပြီဖြစ်ပြီး ပိုအန္တရာယ် ကြီးမားပါတယ်။
သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကြောင့် သေဆုံးမှုက ကူးစက်ခံရမှုရဲ့ ၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပေါ့ဆသင့်တဲ့ ရောဂါတစ်ခု မဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တစ်နှစ်ကို လူပေါင်း သန်းတစ်ရာလောက် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်ခံနေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကူးစက်ခံရတဲ့သူ အတော်များများက အာဖရိကတိုက်နဲ့ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာပိုင်းဒေသတွေနဲ့ အရှေ့တောင်အာရှတိုက်မှာ ဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရောဂါအများစုလိုပဲ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကို တိုက်ရိုက်ကုသနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းမရှိသေးပါဘူး။ လူနာခံစားရတဲ့ ဝေဒနာပေါ်မူတည်ပြီး ကုသမှုပေးလို့ပဲ ရပါတယ်။
Related Article >>> ကျန်းမာငယ်ရွယ်တဲ့ အားကစားသမားတွေကိုမှ ခြွေယူတတ်တဲ့ရောဂါ
အဝါရောင်အဖျားရောဂါက အာဖရိကတိုက်နဲ့ တောင်အမေရိကတိုက်မှာ အတွေ့ရများပါတယ်။ ဖြစ်ရတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကတော့ Flavivirus ကြောင့်ဖြစ်ပြီး သွေးလွန်တုပ်ကွေးကိုဖြစ်စေတဲ့ အေးဒီးစ် ခြင်ကြောင့်ပဲဖြစ်တာပါ။ အေးဒီးစ်ခြင်ကြားအုပ်စုရှိတဲ့အထဲကမှ Aedes aegypti ဆိုတဲ့ ခြင်ကြောင့် အဓိကဖြစ်ရတာပါ။
ရောဂါပိုးသယ်ဆောင်လာတဲ့ ခြင်ကြားအကိုက်ခံရပြီး ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးက ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ပေါက်ပွားဖို့ ၃ ရက် ကနေ ၆ ရက်လောက်အထိ ကြာတတ်ပါတယ်။ ဒီနောက်မှာတော့ ရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ ချမ်းတုန်ဖျားတာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ ပျို့အန်တာတွေဖြစ်လာပါမယ်။ နောက်ပိုင်းဆို နှာခေါင်း သွေးလျှံတာ၊ သွေးအန်တာနဲ့ ဗိုက်အောင့်တာတွေအထိပါ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အဝါရောင် အဖျားရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့ လူအားလုံးရဲ့ ၁၅ ကနေ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က အသက်အန္တရာယ် ရှိပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက် တိတိကျကျ ကုသမှု မရှိသေးပါဘူး။ သို့ပေမဲ့ ရောဂါဖြစ်နေတဲ့နေရာ ဒေသတွေကို သွားရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ ကြိုတင်ပြီး ကာကွယ်ဆေး ထိုးသွားလို့ရပါတယ်။
ငှက်ဖျားရောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့ ကပ်ပါးကောင်တွေကတော့ Plasmodium falciparum ဒါမှမဟုတ် Plasmodium vivax တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကပ်ပါးကောင်တွေကို Anopheles ခြင်အမတွေက သယ်ဆောင်ပါတယ်။ ကပ်ပါးပိုးတွေ ခြင်ရဲ့ ကိုယ်ထဲရောက်သွားပြီးရင် မျိုးပွားလာဖို့ ၁၀ ရက်ကနေ ၂ ပတ်လောက် အထိ ကြာမြင့်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ရောဂါပိုးပါတဲ့ ခြင်က နောက်လူတွေကို ထပ်ကိုက်ရာက တစ်ဆင့် ရောဂါကူးစက်ခံရပါတယ်။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ကပ်ပါးကောင်တွေ ရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ ပိုးတွေက အသည်းထဲကို ဝင်သွားပြီး အသည်းထဲမှာ ပွားများလာတယ်၊ ကြီးထွားလာပါတယ်။ အကောင်ရေ များလာတာနဲ့အမျှ သွေးလည်ပတ်မှု စနစ်ထဲကို ဝင်ရောက်သွားပြီး လူနာရဲ့ သွေးနီဥဆဲလ်တွေကို ဖျက်စီးပစ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်ရောက်ရင် လူနာမှာ ချမ်းတုန်ဖျားတာ၊ ချွေးထွက်တာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ စတဲ့ ငှက်ဖျား လက္ခဏာတွေ ပြလာပါတော့တယ်။ အချိန်မီ မကုသဘူးဆိုရင် ပိုဆိုးတဲ့အဆင့်ထိ ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးတာမျိုး အထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ငှက်ဖျားဆေးတွေပေးပြီး ကုသနိုင်ပါတယ်။
၅။ ဇီကာ ဗိုင်းရပ်စ်
၂၀၁၆ တုန်းက ကမ္ဘာမှာ အတော်လေး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကို ပျံ့နှံ့သွားတဲ့ ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ကိုတော့ လူအတော်များများကြားဖူးကြမှာပါ။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးတောင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာပြီး ကိုင်တွယ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရရင် မွေးရာပါ ဦးခေါင်းကျုံ့တဲ့ရောဂါ ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ အထူးသဖြင့် မိခင်တွေ ပိုဂရုစိုက်ရပါတယ်။
ဇီကာ ဗိုင်းရပ်စ်က အေးဒီးစ်ခြင်ကနေ တစ်ဆင့် ကူးစက်သလို လိင်ဆက်ဆံရာကနေလည်း ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ အေးဒီးစ်ခြင်တွေက နေ့ခင်းဘက် ကိုက်တတ်တဲ့ ခြင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဇီကာ ဗိုင်းရပ်စ်ကို ကြိုတင်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ကာကွယ်လို့မရပါဘူး။ တတ်နို်င်သလောက် ခြင်အကိုက်မခံရအောင် လုပ်လို့ပဲရပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေအနေနဲ့တော့ ဇီကာဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကို မသွားတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတဲ့ လူတွေရဲ့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က ဘာလက္ခဏာမှ သိသိသာသာ မပြတတ်တဲ့အတွက် ရောဂါရှိနေမှန်းလည်း မသိကြတာများပါတယ်။ လက္ခဏာပြခဲ့ရင်တော့ ငွေ့ငွေ့ဖျားမယ်၊ အနီကွက်တွေထမယ်၊ အဆစ်အမြစ်နာမယ်၊ မျက်လုံးရောင်မယ် စတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Related Article >>> အစာအိမ်ရောဂါသမားတွေ သိကို သိထားသင့်တဲ့ စားစရာတွေအကြောင်း
၆။ Chikungunya အဖျားရောဂါ
Chikungunya အဖျားရောဂါဟာလည်း ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံထားရတဲ့ခြင် အကိုက်ခံရတဲ့အခါ ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါပိုးကို သယ်ဆောင်တဲ့ အေးဒီးစ်ခြင်ကြားကြောင့်ပဲ ဖြစ်တာဖြစ်ပြီး Aedes aegypti နဲ့ Aedes albopictus ဆိုတဲ့ အမျိုးအစားခွဲ ၂ မျိုးကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ဝင်ရောက်ပြီး ၃ ရက်ကနေ တစ်ပတ်လောက်အကြာမှာ လက္ခဏာတွေ စပြလာပါမယ်။ လက္ခဏာတွေကတော့-
ရောဂါဖြစ်ရင် အနားယူတာ၊ ရေဓာတ်ပြန်ဖြည့်ပေးတာ၊ ဖျားနာတာအတွက် သောက်ဆေး သောက်တာတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အခုပြောခဲ့တာတွေကတော့ ခြင်ကိုက်ခံရာကနေ တစ်ဆင့် ကူးစက်ခံနိုင်တဲ့ရောဂါတွေနဲ့ ရောဂါ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ခြင်အမျိုးအစားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အပူပိုင်းဒေသထဲ ပါဝင်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ခြင်ကနေ တစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ရောဂါ အတော်များများကို စိတ်ပူရမယ့် အခြေအနေလည်း ရှိနေပြီး ခြင်တွေပိုပေါက်ပွားလေ့ရှိတဲ့ မိုးတွင်းအချိန်မျိုးက ပိုအန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးလေး ဖတ်ပြီးချိန်မှာတော့ ခြင်အကိုက်ခံတာ ဘယ်လောက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ သတိပြုမိသွားမယ်ဆိုရင် ကျေနပ်မိပါကြောင်း ပြောကြားရင်း…
ဤဆောင်းပါးအား ပံ့ပိုးကူညီပေးပါသော ကျန်းကျန်းမာမာ by Alinker အား အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ဖတျကွညျ့ရငျးနဲ့တောငျ ဟိုနားက ခွငျကိုကျသလို ဒီနားက ခွငျကိုကျသလို.. :'(
ခွငျဆိုတာ သေးသေးလေးနဲ့ ကနျြးမာရေးအတှကျ အငျမတနျ အန်တရာယျပေးနိုငျတဲ့အကောငျ ဖွဈပါတယျ။ ဒီ စငျတီမီတာ အနညျးငယျလောကျပဲ ရှိတဲ့ အကောငျလေးတှေ ကိုကျတာခံရရငျ ရရှိနိုငျတဲ့ရောဂါတှေ အမြားကွီး ရှိပါတယျ။ အခု ဒီဆောငျးပါးမှာ ခွငျကိုကျခွငျးကွောငျ့ အဖွဈမြားတဲ့ရောဂါတှထေဲက တခြို့ကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
၁။ ဦးနှောကျအမွှေးပါး ရောငျရမျးခွငျး
ခွငျကိုကျရာက တဈဆငျ့ ပြံ့နှံ့နိုငျတဲ့ ရောဂါအုပျစုထဲမှာ ဦးနှောကျအမွှေးရောငျရောဂါတှကေ အတျောလေး အဖွဈမြားပါတယျ။ ရောဂါဖွဈစတေဲ့ ဗိုငျးရပျဈက ငှကျတှရေဲ့ သှေးထဲမှာ ပါဝငျနပေါတယျ။ ဒီငှကျတှကေို ကြူးလပျဈခွငျ (Culex Mosquitoes) အမြိုးအစားက ကိုကျလိုကျရာက တဈဆငျ့ ဗိုငျးရပျဈပိုးက ခွငျတှဆေီ ရောကျရှိသှားပါတယျ။ ဒီကြူးလပျဈခွငျတှကေ လူတှကေို သှေးပွနျစုပျရာကနေ ရောဂါပြံ့နှံ့ ဖွဈပှားစပေါတယျ။
ဦးနှောကျအမွှေးရောငျဖွဈစတေဲ့ ဗိုငျးရပျဈနာမညျကိုတော့ West Nile ဗိုငျးရပျဈလို့ ချေါပါတယျ။ ခွငျတှေ သယျဆောငျလာတဲ့ ဗိုငျးရပျဈက လူကိုကိုကျလိုကျတာက တဈဆငျ့ သှေးထဲ ဝငျရောကျသှားပါတယျ။ ဒီဗိုငျးရပျဈက ဦးနှောကျနဲ့ ကြောရိုးမကွီး တဈဝိုကျကို ရောငျရမျးလာစပေါတယျ။
လူနာက ဒီအခြိနျမှာ ဖြားမယျ၊ ခေါငျးကိုကျမယျ၊ ပွနျရညျကွောအကွိတျတှေ ကွီးလာမယျ၊ ဇကျတောငျ့လာမယျ။ အခွအေနအေတျောဆိုးတဲ့သူတှမှောဆို တကျမယျ၊ ကိုမာချေါတဲ့ သတိမမွေ့ောတဲ့အဆငျ့ထိ ရောကျမယျ။ အဲဒီကနေ အသကျသဆေုံးတဲ့ အဆငျ့ထိ ရောကျသှားနိုငျပါတယျ။ အခြိနျမီ ကုသနိုငျရငျ အသကျရှငျနိုငျပမေဲ့ တဈသကျလုံး အာရုံကွောအဖှဲ့အစညျး ထိခိုကျမိသှားဖို့ ပိုမြားပါတယျ။
ကမ်ဘာ့နရောအသီးသီးက နရောပျေါမူတညျပွီး ဒီဦးနှောကျအမွှေးရောငျရောဂါကိုလညျး အမြိုးမြိုး ချေါဝျေါကွပါတယျ။ ဥပမာ အမရေိကနျနိုငျငံ ဖလျောရီဒါပွညျနယျနဲ့ မက်ကဆီကို ပငျလယျကှမှေ့ာဖွဈရငျ St. Louis ဦးနှောကျရောငျရောဂါ၊ အကျတလနျတာလို့ချေါပွီး ကာရီဘီယံပငျလယျတဈဝိုကျနဲ့ တောငျအမရေိက တဈဝိုကျမှာဖွဈရငျ Eastern Equine ဦးနှောကျရောငျရောဂါလို့ ချေါပါတယျ။ နောကျပွီး အာရှတဈဝိုကျနဲ့ ပစိဖိတျအနောကျပိုငျးမှာဖွဈရငျ ဂပြနျဦးနှောကျအမွှေးရောငျရောဂါ စသညျဖွငျ့ ချေါဝျေါကွပါတယျ။
လလေ့ာမှုတှအေရတော့ ကူးစကျခံရတဲ့သူ ၁၅၀ မှာ တဈယောကျလောကျပဲ ရောဂါလက်ခဏာတှေ ဆိုးဆိုးရှားရှား ခံစားရစတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အသကျအရှယျကွီးတဲ့သူ အထူးသဖွငျ့ အသကျ၅၀ ကြျော လူကွီးတှဆေို ပိုပွီးခံစားရပါမယျ။ ရောဂါတဈခါ ကူးစကျခံရပွီးပွီဆိုရငျ သဘာဝအရကို ဒီရောဂါကို ကာကှယျမှု ပေးလိုကျသလိုဖွဈပွီး နောကျတဈခါ ထပျမကူးစကျခံရတော့ဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။
အပူပိုငျးနဲ့ သမပိုငျးဇုနျဒသေတှမှော ပိုအတှရေ့မြားတဲ့ ရောဂါတဈခု (မွနျမာနိုငျငံမှာလညျး အတျောလေးအဖွဈမြားပါတယျ) ကတော့ သှေးလှနျတုပျကှေးရောဂါပဲ ဖွဈပါတယျ။ သှေးလှနျတုပျကှေး ရောဂါကို သယျဆောငျတာက အေးဒီဈ (Aedes Mosquitoes) ခွငျပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့ ကူးစကျပုံကလညျး အပျေါက West Nile ဗိုငျးရပျဈကူးစကျပုံနဲ့ ဆငျတူပါတယျ။
သှေးလှနျတုပျကှေးဗိုငျးရပျဈက လူ့ခန်ဓာကိုယျထဲဝငျရောကျပွီးရငျ ခန်ဓာကိုယျထဲက ဆဲလျတှကေို ဖကျြစီးပဈနိုငျပါတယျ။ ပွနိုငျတဲ့ ရောဂါလက်ခဏာတှကေ ပုံမှနျဖြားနာတာနဲ့ ဆငျတူပါတယျ။
ဖြားတာ တဈပတျကြျောပွီး ကိုယျတှငျးသှေးယိုတာတှေ၊ အညိုအမညျး စှဲတာတှပေါ တှဲဖွဈလာမယျဆိုရငျ ဒါဟာ သှေးလှနျတုပျကှေး သှေးယိုအဆငျ့ထိ ရောကျသှားပွီဖွဈပွီး ပိုအန်တရာယျ ကွီးမားပါတယျ။
သှေးလှနျတုပျကှေးရောဂါကွောငျ့ သဆေုံးမှုက ကူးစကျခံရမှုရဲ့ ၅ ရာခိုငျနှုနျးအထိ ရှိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ပေါ့ဆသငျ့တဲ့ ရောဂါတဈခု မဟုတျတာတော့ သခြောပါတယျ။ လလေ့ာမှုတှအေရ ကမ်ဘာပျေါမှာ တဈနှဈကို လူပေါငျး သနျးတဈရာလောကျ သှေးလှနျတုပျကှေးရောဂါ ကူးစကျခံနရေတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ကူးစကျခံရတဲ့သူ အတျောမြားမြားက အာဖရိကတိုကျနဲ့ ပစိဖိတျသမုဒ်ဒရာပိုငျးဒသေတှနေဲ့ အရှတေ့ောငျအာရှတိုကျမှာ ဖွဈတာတှရေ့ပါတယျ။ ဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ဖွဈတဲ့ ရောဂါအမြားစုလိုပဲ သှေးလှနျတုပျကှေးရောဂါကို တိုကျရိုကျကုသနိုငျတဲ့ နညျးလမျးမရှိသေးပါဘူး။ လူနာခံစားရတဲ့ ဝဒေနာပျေါမူတညျပွီး ကုသမှုပေးလို့ပဲ ရပါတယျ။
Related Article >>> ကနျြးမာငယျရှယျတဲ့ အားကစားသမားတှကေိုမှ ခွှယေူတတျတဲ့ရောဂါ
အဝါရောငျအဖြားရောဂါက အာဖရိကတိုကျနဲ့ တောငျအမရေိကတိုကျမှာ အတှရေ့မြားပါတယျ။ ဖွဈရတဲ့ ဗိုငျးရပျဈကတော့ Flavivirus ကွောငျ့ဖွဈပွီး သှေးလှနျတုပျကှေးကိုဖွဈစတေဲ့ အေးဒီးဈ ခွငျကွောငျ့ပဲဖွဈတာပါ။ အေးဒီးဈခွငျကွားအုပျစုရှိတဲ့အထဲကမှ Aedes aegypti ဆိုတဲ့ ခွငျကွောငျ့ အဓိကဖွဈရတာပါ။
ရောဂါပိုးသယျဆောငျလာတဲ့ ခွငျကွားအကိုကျခံရပွီး ဗိုငျးရပျဈပိုးက ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ ပေါကျပှားဖို့ ၃ ရကျ ကနေ ၆ ရကျလောကျအထိ ကွာတတျပါတယျ။ ဒီနောကျမှာတော့ ရောဂါလက်ခဏာတှဖွေဈတဲ့ ခမျြးတုနျဖြားတာ၊ ခေါငျးကိုကျတာ၊ ပြို့အနျတာတှဖွေဈလာပါမယျ။ နောကျပိုငျးဆို နှာခေါငျး သှေးလြှံတာ၊ သှေးအနျတာနဲ့ ဗိုကျအောငျ့တာတှအေထိပါ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
အဝါရောငျ အဖြားရောဂါကူးစကျခံရတဲ့ လူအားလုံးရဲ့ ၁၅ ကနေ ၅၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျက အသကျအန်တရာယျ ရှိပါတယျ။ ဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ဖွဈတဲ့အတှကျ တိတိကကြ ကုသမှု မရှိသေးပါဘူး။ သို့ပမေဲ့ ရောဂါဖွဈနတေဲ့နရော ဒသေတှကေို သှားရောကျမယျဆိုရငျတော့ ကွိုတငျပွီး ကာကှယျဆေး ထိုးသှားလို့ရပါတယျ။
ငှကျဖြားရောဂါကိုဖွဈစတေဲ့ ကပျပါးကောငျတှကေတော့ Plasmodium falciparum ဒါမှမဟုတျ Plasmodium vivax တို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကပျပါးကောငျတှကေို Anopheles ခွငျအမတှကေ သယျဆောငျပါတယျ။ ကပျပါးပိုးတှေ ခွငျရဲ့ ကိုယျထဲရောကျသှားပွီးရငျ မြိုးပှားလာဖို့ ၁၀ ရကျကနေ ၂ ပတျလောကျ အထိ ကွာမွငျ့တတျပါတယျ။ အဲဒီနောကျ ရောဂါပိုးပါတဲ့ ခွငျက နောကျလူတှကေို ထပျကိုကျရာက တဈဆငျ့ ရောဂါကူးစကျခံရပါတယျ။
လူ့ခန်ဓာကိုယျထဲကို ကပျပါးကောငျတှေ ရောကျသှားပွီဆိုတာနဲ့ ပိုးတှကေ အသညျးထဲကို ဝငျသှားပွီး အသညျးထဲမှာ ပှားမြားလာတယျ၊ ကွီးထှားလာပါတယျ။ အကောငျရေ မြားလာတာနဲ့အမြှ သှေးလညျပတျမှု စနဈထဲကို ဝငျရောကျသှားပွီး လူနာရဲ့ သှေးနီဥဆဲလျတှကေို ဖကျြစီးပဈပါတယျ။ ဒီအဆငျ့ရောကျရငျ လူနာမှာ ခမျြးတုနျဖြားတာ၊ ခြှေးထှကျတာ၊ ခေါငျးကိုကျတာ စတဲ့ ငှကျဖြား လက်ခဏာတှေ ပွလာပါတော့တယျ။ အခြိနျမီ မကုသဘူးဆိုရငျ ပိုဆိုးတဲ့အဆငျ့ထိ ရောကျသှားတတျပါတယျ။ ဥပမာ ကြောကျကပျပကျြစီးတာမြိုး အထိ ဖွဈတတျပါတယျ။ ငှကျဖြားဆေးတှပေေးပွီး ကုသနိုငျပါတယျ။
၅။ ဇီကာ ဗိုငျးရပျဈ
၂၀၁၆ တုနျးက ကမ်ဘာမှာ အတျောလေး ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ကို ပြံ့နှံ့သှားတဲ့ ဇီကာဗိုငျးရပျဈကိုတော့ လူအတျောမြားမြားကွားဖူးကွမှာပါ။ ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ကွီးတောငျ ကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာ အရေးပျေါအခွအေနကွေညောပွီး ကိုငျတှယျခဲ့ရပါတယျ။ ဇီကာဗိုငျးရပျဈကူးစကျခံရရငျ မှေးရာပါ ဦးခေါငျးကြုံ့တဲ့ရောဂါ ဖွဈပှားတတျပါတယျ။ ဆိုတော့ အထူးသဖွငျ့ မိခငျတှေ ပိုဂရုစိုကျရပါတယျ။
ဇီကာ ဗိုငျးရပျဈက အေးဒီးဈခွငျကနေ တဈဆငျ့ ကူးစကျသလို လိငျဆကျဆံရာကနလေညျး ကူးစကျနိုငျပါတယျ။ အေးဒီးဈခွငျတှကေ နခေ့ငျးဘကျ ကိုကျတတျတဲ့ ခွငျတှဖွေဈပါတယျ။ ဇီကာ ဗိုငျးရပျဈကို ကွိုတငျကာကှယျဆေးထိုးပွီး ကာကှယျလို့မရပါဘူး။ တတျနိုငျသလောကျ ခွငျအကိုကျမခံရအောငျ လုပျလို့ပဲရပါတယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျ မိခငျတှအေနနေဲ့တော့ ဇီကာဗိုငျးရပျဈ ဖွဈနတေဲ့နရောတှကေို မသှားတာ အကောငျးဆုံးဖွဈပါတယျ။
ဇီကာဗိုငျးရပျဈကူးစကျခံရတဲ့ လူတှရေဲ့ ၈၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျက ဘာလက်ခဏာမှ သိသိသာသာ မပွတတျတဲ့အတှကျ ရောဂါရှိနမှေနျးလညျး မသိကွတာမြားပါတယျ။ လက်ခဏာပွခဲ့ရငျတော့ ငှငှေ့ဖြေ့ားမယျ၊ အနီကှကျတှထေမယျ၊ အဆဈအမွဈနာမယျ၊ မကျြလုံးရောငျမယျ စတာတှဖွေဈနိုငျပါတယျ။
Related Article >>> အစာအိမျရောဂါသမားတှေ သိကို သိထားသငျ့တဲ့ စားစရာတှအေကွောငျး
၆။ Chikungunya အဖြားရောဂါ
Chikungunya အဖြားရောဂါဟာလညျး ဗိုငျးရပျဈပိုးကူးစကျခံထားရတဲ့ခွငျ အကိုကျခံရတဲ့အခါ ဖွဈပှားတတျပါတယျ။ သှေးလှနျတုပျကှေးရောဂါပိုးကို သယျဆောငျတဲ့ အေးဒီးဈခွငျကွားကွောငျ့ပဲ ဖွဈတာဖွဈပွီး Aedes aegypti နဲ့ Aedes albopictus ဆိုတဲ့ အမြိုးအစားခှဲ ၂ မြိုးကွောငျ့ ဖွဈတတျပါတယျ။
ဗိုငျးရပျဈပိုး ခန်ဓာကိုယျထဲ ဝငျရောကျပွီး ၃ ရကျကနေ တဈပတျလောကျအကွာမှာ လက်ခဏာတှေ စပွလာပါမယျ။ လက်ခဏာတှကေတော့-
ရောဂါဖွဈရငျ အနားယူတာ၊ ရဓောတျပွနျဖွညျ့ပေးတာ၊ ဖြားနာတာအတှကျ သောကျဆေး သောကျတာတှေ လုပျနိုငျပါတယျ။
အခုပွောခဲ့တာတှကေတော့ ခွငျကိုကျခံရာကနေ တဈဆငျ့ ကူးစကျခံနိုငျတဲ့ရောဂါတှနေဲ့ ရောဂါ ဖွဈနိုငျတဲ့ ခွငျအမြိုးအစားတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ အပူပိုငျးဒသေထဲ ပါဝငျနတေဲ့ မွနျမာနိုငျငံအနနေဲ့ ခွငျကနေ တဈဆငျ့ ကူးစကျတဲ့ရောဂါ အတျောမြားမြားကို စိတျပူရမယျ့ အခွအေနလေညျး ရှိနပွေီး ခွငျတှပေိုပေါကျပှားလရှေိ့တဲ့ မိုးတှငျးအခြိနျမြိုးက ပိုအန်တရာယျရှိနပေါတယျ။
ဒီဆောငျးပါးလေး ဖတျပွီးခြိနျမှာတော့ ခွငျအကိုကျခံတာ ဘယျလောကျအန်တရာယျရှိတယျဆိုတာ အတိုငျးအတာတဈခုထိ သတိပွုမိသှားမယျဆိုရငျ ကနြေပျမိပါကွောငျး ပွောကွားရငျး…
ဤဆောငျးပါးအား ပံ့ပိုးကူညီပေးပါသော ကနျြးကနျြးမာမာ by Alinker အား အထူးပငျ ကြေးဇူးတငျရှိပါသညျ။
Tags: bite, Fever, Health, Mosquito, signs, Symptoms, virus
For Her Myanmar November 12, 2018